Iindaba -Kubudala be-5G, kuya kubakho utshintsho olukhulu kule nkalo
Xa kuthelekiswa netekhnoloji yonxibelelwano yemveli, i-5G inentsebenzo eyomeleleyo, izigcawu ezingakumbi kunye ne-ecology entsha, enokuthi ihlangabezane neemfuno zesicelo seshishini lokuvelisa ngokwesiko kuthungelwano olungenazingcingo, kunye nokuqhuba ulwazi lwetekhnoloji, itekhnoloji yokuvelisa, itekhnoloji yezinto ezintsha kunye netekhnoloji entsha yamandla yokungena ngokubanzi kuwo onke amabakala emveliso ye-elektroniki, oko ke kukhokelela kutshintsho olukhulu kubuchwephesha kushishino. Umzekelo, ngenkxaso yenethiwekhi ye-5G ngesantya esikhawulezayo, ukulibaziseka okuphantsi, amandla amakhulu kunye nokuthembeka okuphezulu, usetyenziso olunqamlezileyo kwicandelo lovavanyo lwe-elektroniki kunye nomlinganiso, njengamaza e-millimeter, i-MIMO enkulu kunye ne-beamforming eguqukayo. kulindeleke ukuba ibe yinyani, eya kuthi ngokuqinisekileyo ifune ukuphucula kakhulu ukuchaneka kunye nokusebenza ngokukuko kovavanyo lwekhompyuter kunye nomlinganiso.
Kwicandelo lemoto, iselfowuni, isixhobo sasekhaya, izixhobo ezinokunxitywa, izixhobo zeshishini kunye nezixhobo zobunjineli, usetyenziso lobuchwephesha be5G lubanzi kwaye lubunzulu. Kwitsheyini eliphambili lemizi-mveliso yonxibelelwano ye-chip, imodyuli yonxibelelwano, i-eriyali, amaza kanomathotholo, njl njl exhaswa yitekhnoloji ye-5G, itekhnoloji ye5G iya kuzisa amandla amatsha kwezi ndawo zokwenza imveliso. Umzekelo, kwishishini le-SMT, ukuxhamla kwimfuno ekhulayo yetekhnoloji ye-5g yezixhobo ezinesantya esiphezulu kunye nesantya esiphezulu, i-PCB imalunga nokungenisa imeko elungileyo yokunyuka kwevolumu kunye nexabiso; Ukusetyenziswa kwesikhululo sesiseko se5G kunye nefowuni yefowuni ye5G, kubandakanya elektroniki yezithuthi, iya kuzisa umphathi omkhulu, ibhendi yokuhamba rhoqo, ibhendi yamaza aphezulu kunye nobunye ubuchwephesha, ukuze i-R & D yamacandelo onxibelelwano phakathi kwe-RF yangaphambili-eriyali kunye ne-baseband chip ukukhula ngokukhawuleza; kunye nenkqubo yecomputer exhaswa yi5G Imveliso inokwenza ukuba inkqubo yokuvelisa ichaneke ngakumbi, isetyenziselwe ukwahluka kunye nokusetyenziswa okuphantsi, kwaye amashishini afana nokunxiba okrelekrele kunye nokwenza imveliso kuya kuzisa izibonelelo ezibalulekileyo. Kuyabonakala ukuba i-5G isebenzisa izibonelelo zayo ezingenakuthelekiswa nanto ukwenza ukuba umzi mveliso we-elektroniki usebenze ngokuqhubekekayo nangokungagungqiyo kwiimeko ezahlukeneyo, eziza kunceda ishishini lokuvelisa elektroniki ukuba liphucule iimeko zabasebenzi, ukunciphisa ukungenelela kwesikhokelo kwimigca yemveliso, kwaye kakhulu ukuphucula ukulawulwa kweenkqubo zemveliso.
Imveliso ekrelekrele ikulungele ukwazisa umzi-mveliso we-5G wenkxaso kwindlela ekhawulezayo
Ukongeza kumzi mveliso we-elektroniki, i-5G inokuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zonxibelelwano lwezixhobo kunye nokusetyenziswa okukude okusebenzayo kwimeko yemizi-mveliso. Indawo yemveliso ekrelekrele emelwe yi-Intanethi yezinto, ulawulo oluzenzekelayo lweshishini, irobhothi yelifu, njl.njl. Iya kuvula ixesha elitsha lonxibelelwano olubanzi lwento yonke kunye nokunxibelelana okunzulu kwabantu kunye nekhompyuter kwangaphambili kunye nenkxaso yetekhnoloji ye5G.
Njenge teknoloji ephambili yokuxhasa ukudibanisa abantu, oomatshini kunye nezixhobo, i-Intanethi yezinto kunye netekhnoloji ye5G zenza ubudlelwane obudibeneyo. Ukusetyenziswa kwe-Intanethi kwezinto kuxhomekeke kwi-5G ukubonelela ngemeko ezahlukeneyo zezisombululo zonxibelelwano ngaphandle kwamacingo, kunye nokukhula kwemigangatho yetekhnoloji ye-5G ikwafuna ukukhuthazwa kunye nokukhuthazwa kwe-Intanethi yezinto. Ulawulo esizisebenzelayo sesona sicelo sisisiseko kwizityalo ezikrelekrele zokuvelisa. Inkqubo yayo engundoqo ifuna ukuchaneka okuphezulu, ukulibaziseka okuphantsi kunye nonxibelelwano lwenkqubo ethembekileyo. Yi-5G kuphela eyenza ukuba isicelo solawulo esivaliweyo-esivaliweyo senziwe ngokunxibelelana kwenethiwekhi ngaphandle kwamacingo.
Okumangalisa kukuba, kwangelo xesha linye leNepcon China, eza kubanjwa nge-24 ukuya ku-Epreli ngo-Epreli, umzi-mveliso okrelekrele kunye nomboniso wetekhnoloji ezenzekelayo uza kuphehlelela umgca wemveliso "we-SmartWorks" we-2.0, eyindlela efanelekileyo yokuvelisa ukubonisa ngokupheleleyo amandla inkqubo yemveliso yokunxibelelana kwezixhobo zemigca yokuvelisa. Gcwalisa iodolo yemveliso ye-elektroniki eyenziwe ngokwezifiso ezivela kuyo yonke inkqubo yokuveliswa kwemveliso ye-elektroniki yokwenziwa kwe-oda yokwenyani yexesha lokwenyani, ukunyusa icandelo, ukuhlangana kweqokobhe kunye novavanyo oluzenzekelayo.
Kwicandelo lezinto ezisetyenziswayo, ukusuka kulawulo lwendawo yokugcina izinto ukuya kuhanjiso lwempahla, sifuna ukugubungela ngokubanzi, ukugubungela okunzulu, ukusetyenziswa kwamandla asezantsi, unxibelelwano olukhulu, iteknoloji yokuxhuma ngexabiso eliphantsi kunye nokugubungela inethiwekhi, kunye nenethiwekhi ye5G inokuhlangabezana nezi mfuno kakuhle. Kwimeko yokuvelisa okrelekrele, kuhlala kuyimfuneko ukuba irobhothi ibenombutho kunye nobuchule bokusebenzisana ukuhlangabezana nemveliso eguqukayo, ethi izise imfuno yerobhothi yelifu. Itekhnoloji ye-5g ihambisa inani elikhulu lemisebenzi yekhompyuter kunye nemisebenzi yokugcina idatha kwilifu, enokuthi inciphise kakhulu iindleko kunye nokusetyenziswa kwamandla kwezixhobo zerobhothi, kwaye ikhawulelane ngokunzulu neemfuno zokuvelisa okuguqukayo.
Ukuqiniseka, itekhnoloji ye5G iya kuba sisitshixo sokuxhasa utshintsho lweMveliso yeNtloko kwixesha elizayo. Ayinakusebenzisa kuphela iimeko ezininzi ukudibanisa abantu abasasazekileyo nabasasazekileyo, oomatshini kunye nezixhobo, kunye nokwakha i-Intanethi emanyeneyo, kodwa ikwaxhasa yonke inkqubo ye-Intanethi ephathekayo enexesha-lokwenyani kunye nokuthembeka okuphezulu ukunceda amashishini okuvelisa asuse isiphithiphithi Itekhnoloji yangaphambili yenethiwekhi engenazingcingo, eya kuthi ibe nefuthe elihle ekuphunyezweni kwe-Intanethi yoshishino kunye nokwanda kweenguqu kwimveliso ekrelekrele ebalulekileyo.
Ukusukela ekuvulweni kweQonga le-Boao lase-Asiya ngo-Epreli 2018 ukuya ekubanjweni kwenkomfa yokusebenza yezoqoqosho engasekupheleni konyaka, i-5G ayothusi ukuba lilizwi eliphambili lonyaka kwicandelo lezoqoqosho. Njengesizukulwane esitsha setekhnoloji yokunxibelelana ngefowuni, i-5G ubuncinci ubuncinci amaxesha e-10 isantya sokuphakama kwe-4G, ukulibaziseka kwenqanaba lemillisecond kunye namandla okuxhuma kwinqanaba le-100. Phantsi kolwakhiwo lwayo, uqoqosho lwedijithali olugubungela i-intanethi kunye nokungaxhunyiwe kwi-intanethi, ukusetyenziswa kunye nemveliso, iqonga kunye ne-ecology ziya kufumana amandla amakhulu okuqhuba. Ngokukodwa ishishini lokuvelisa elektroniki, elithathwa njenge "mbono onzima" kuqoqosho lwesizwe, likwixesha elibalulekileyo lenguqu kunye nohlaziyo. Ifuna inkxaso ethe kratya yetekhnoloji emelwe yi-5G ukuze ifumane umjikelo omtsha womjikelo wokukhula kunye namandla okukhula, kwaye izise utshintsho olukhulu kwimowudi yokuvelisa nakwindlela yophuhliso.
Sibonelela ngesisombululo se-SMT esisodwa kumenzi weemveliso ze-5G, i-Siemens mounter, i-Fuji mounter, i-Panasonic mounter, i-Samsung mounter kunye ne-SMT yezixhobo zepheripheral, wamkelekile ukubuza!